Nagu saabsan | KOOXDA CHUNKAI
Ku saabsan Chunkai
KOOXDA CHUNKAI waxaa la aasaasay 1995, haddana waxaa loo qaybiyay saddex qaybood:
Shanghai Shenhe Technology xirxirida Co., Ltd.- oo ku takhasustay wax soo saarka caaga ah
Feng Qi Feng Teknolojiyada Daabacaadda (Shanghai) Pty, Ltd - oo ku takhasustay wax soo saarka waraaqaha
Shanghai Chunkai Trading Co., Ltd.- oo ku xeel dheer ganacsiga soo dejinta iyo dhoofinta
KOOXDA CHUNKAI waxay u heellan tahay inay dhisto shirkadda ugu sarreysa baakadaha adduunka, noocyadeenna kaladuwan ee dhowaan la siidaayay, badeecadaha heerkoodu sarreeyo ee heer caalami ah iyo adeegyada macaamiisha ee foojignaanta leh ayaa aad loogu qadarinayaa shirkadaha caanka ah sida Disney, Mengniu Dairy, Pepsi, iwm
In ka badan 25 sano, si loo daboolo baahiyaha macaamiisha waxaan balaarineynay khadadka wax soo saarkeena, oo hada ay kujirto warshadeena waraaqda iyo baakadaha caagaga ah iyo sidoo kale nidaamka alaab-qeybiyeyaasha kale.
Waxaan haynaa xakameyn tayo leh oo 10 shaqaale QC ah (oo ay ku jiraan 3IQC, 2 IPQC, 5 OQC) iyo 4 shaqaale QA ah oo ka socda alaabta ceyriinka ah ee soo galaya alaabada la soo gabagabeeyay. Waxaan ku shaqeyneynaa ISO9001 ， ISO140000 standard QS system.
Kooxdayadu waxay bixinaysaa cilmi-baaris wax soo saar, qaabeyn, habraac iyo adeegyo soo-iibinta kadib. Waxaan u rarnaa alaabteena waqtigeeda, maxaa yeelay waxaan haysannaa wax ka badan 1000 nidaam wax-qeybiyeyaal lagu kalsoon yahay.
Warshadaha gacansaarka la leh
KOOXDA CHUNKAI 'S degmada warshad cusub ayaa lagu soo gabagabeeyey 2015, oo leh qaab-midnimo saddex ah, oo ay ku jiraan aqoon-isweydaarsiyo of plasbacda ticiska, dhalada caaga ah, alaabada balaastigga ah, sanduuqa waraaqaha, qalabka guryaha lagu keydiyo iyo waaxaha iibka, cilmi baarista, xayeysiinta,degan 20000 mitir murabac ah, isagoo pro ah isku dhafanaagga warshad marinka iyada oo loo marayo caag ， xirxirida iyo guriga-warshadaha ware ee Shanghai.
KOOXDA CHUNKAI Waxay leedahay in ka badan 100 shaqaale dhalinyaro ah oo ka shaqeeya 3000 oo mitir murabac ah deegaanka xafiiska jardiinada iyo sidoo kale in ka badan 300 oo shaqaale maxalli ah oo ka shaqeeya in ka badan 20000 mitir oo laba jibbaaran. Horumarka iyo khibradda Team waa aasaaska wadada loo maro guusha iyo riyada. Khibrad u leh 4 ilaa 5 bandhig carbeed ama ajnabi sannad kasta, laakiin sidoo kale ka qaybqaado waxqabadyo badan oo dhismo kooxeed ah, oo dhinac dhinac ah midba midka kale.KOOXDA CHUNKAI, qof walba oo ku daba-jira hal himilo si uu u qanciyo baahiyaha ugu dambeeya. istaag oo sii wad markabka.
Marka, waxaan si joogto ah ugu darnaa dhiig cusub kooxdeena iyo inaan higsano himilada ugu dambeysa ---Horumarinta xirfad oo aan ka tagin wax shalaay ah!